စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု Sanction နဲ့ပတ်သက်၍ ~ Nge Naing
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု Sanction နဲ့ပတ်သက်၍
Sunday, January 09, 2011 Nge Naing 10 comments
"ကျမတို့လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုရဲ့ တစိတ်တပိုင်းကတော့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ ကျမတို့ ဆင်းရဲမွဲတေနေ ရတာဟာ လုံလောက်တဲ့ရင်းမြစ်နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ရှားပါးလွန်းလို့မဟုတ်ဘဲ အုပ်ချုပ်မှုကောင်းကောင်း ပေါ်ထွန်းစေ တဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေနဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ နည်းပါးလွန်းလို့သာဖြစ်တယ်။ ဖိနှိပ်လွန်းတဲ့အစိုးရတွေနဲ့ ဆက်ဆံဖို့ နောက်တွန့်စိုးရွံ့ခြင်းမရှိတဲ့ နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ အများအပြား ရှိနေပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ လာရောက်ရတာဟာ ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကူ အညီ ဖြစ်စေဖို့သာ ဖြစ်တယ်လို့ အကြောင်း ပြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့ စီးပွားရေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်၊ ချမ်းသာပြီးသားလူတစုကိုသာ ပိုမိုချမ်းသာစေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်တွေဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တရားမျှတမှုကို ဖော် ဆောင်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး" လို့ New York Times သတင်းစာ၊ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက် ၁၉၉၇ (ဝါရှင်တန်မြို့တော် အမေရိကန် တက္ကသိုလ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ လက်ခံ မိန့်ခွန်း) မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
တိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ ရှိနေတာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ မဖြေရှင်းဘဲ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေတဲ့ စစ်အုပ်စုအောက်မှာ ဘယ်သူသေသေ ကတေမာရင် ပြီးရော ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်း ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ကိုယ်ကျိုးသာကြည့်သော စီးပွားရေးသမားများဟာ စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပိုမိုချမ်းသာနေသည့် ဓနရှင်များကိုသာ အကျိုးပြုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ပြုလုပ်ရန် ငံ့လင့်နေကြပါတယ်။ စစ်အုပ်စုကလည်း မြန်မာပြည် ဆင်းရဲနေတာ Sanction ကြောင့်၊ Sanction ဖြစ်ရတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်လို့ ပြည်သူလူထုကို လိမ်နေတာကို နားယောင်တဲ့သူကလည်း ယောင်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေရဲ့ Sanction ဘာကြောင့် ဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာကို အချိန်ကာလ နေ့ရက်တိတိကျကျနဲ့ တချက်ချင်းစီကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပို့စ်ကို ကိုနစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်မှ ပြန်လည် ကူးယူပြီး ဘလော့ဂ်မှာလည်း သိမ်းထားရင်း ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှု လုပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိဖို့ လိုတယ်။ ပြည်သူကို နစ်နာအောင် လုပ်နေတာ Sanctions မဟုတ်ပါ၊ အဓိကတရားခံမှာ နအဖသာ ဖြစ်တယ်။
အာဏာရှင်တို့၏ စီးပွားရေးတလွဲတချော်စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် နိုင်ငံအချို့၏ ချော့မြှူရေးပေါ်လစီကို လျစ်လျူရှုကာ၊ အာဟာရ ချို့တဲ့နေသည့် ကလေးသူငယ်များ၊ သန်းနှင့်ချီသည့် တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ဒုက္ခသည်များကို လက်ညှိုးထိုးပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုကို အပြစ်ဆိုချင်သူများ ရှိနေပါသည်။ သို့ရာတွင် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောရာတွင် ပညာရှင်အမြင်၊ စစ်အစိုးရဘက်မှ ရှေ့နေလိုက်သူများအမြင်နှင့် စီးပွားရေးသမားများဘက်မှ ရှေ့နေလိုက်သူများအမြင်တို့မှာ နိုင်ငံရေးအမြင်နှင့် အကြီးအကျယ် ကွဲလွဲနေပါသည်။
နှစ်ပတ်ဗီဇာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ်ကြိမ်-သုံးကြိမ်သွားရောက်၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်သည့် မြန်မာလူမျိုးအနည်းငယ်ကို အင်တာဗျူးပြီး ရေးထုတ်လိုက်သည့်စာတမ်းများမှာ မည်သို့အဆင့်ရှိမည်ကို နားလည်ယူနိုင်သည်။ တချိန်တည်းတွင် နိုင်ငံရေးနောက်ခံရှိသူ သို့မဟုတ် မရှိသူ အဆင့်မြင့်ပညာတတ် မြန်မာပြည်သားများကလည်း စစ်အုပ်စုအတွက် လျှောက်လဲချက်ပေးနေကြသည်။ မည်သို့ပင်ရှိစေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ပြုတ်ကျသွားချိန်နှင့် စစ်ထောက်လှမ်း ရေးမှူးချုပ် ခင်ညွန့် ပြုတ်ကျသွားချိန်များတွင် အလားတူ မြန်မာလူမျိုးအများအပြား မြောင်းထဲရောက်သွားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုများ ဘာကြောင့်ချမှတ်ထားပါသနည်း။
(၁) ၁၉၈၈ ခုက ကျောင်းသားများဦးဆောင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲများကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာနှိမ်နင်းခဲ့မှု၊
(၂) ၁၉၈၈ ခုနောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုများ၊
(၃) ၁၉၉၆ ခုတွင် နိုင်ငံခြားသံတမန်တဦးကို အကျဉ်းထောင်တွင်း၌ သတ်ဖြတ်ပစ်မှု၊
(၄) အိုင်အယ်လ်အိုမှ မှတ်တမ်းယူထားသည့် ၂ဝဝ၁ ခုနောက်ပိုင်း အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုများ၊
(၅) ၂ဝဝ၃ ခုနောက်ပိုင်း ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် မူးယစ်ဆေးရငွေများကို တရားဝင်စီးပွားရေးထဲသွင်းမှုများ၊
(၆) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုများ၊
(၇) ၂ဝဝ၃ ခု ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲ၊
(၈) ၂ဝဝ၇ ခု သံဃာတော်များဦးဆောင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲကို ရက်စက်စွာနှိမ်နင်းမှု တို့ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံကို ရက်ရက်စက်စက်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့သည့်အခါ တာဝန်သိနိုင်ငံ အားလုံးက ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း၊ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း စသည့် သင့်လျော်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနှင့် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့က မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ၁၉၉၂ ခုမှ ၂ဝ၁ဝ ခုအထိ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ချမှတ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၆ ခု ဇွန်လ ၂၂ ရက်တွင် ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေ၊ ဖင်လန်၊ ဆွီဒင် နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံများ၏ ကောင်စစ်ဝန် ဂျိမ်းလင် ဒါနစ်ခိုးလ်ကို မိတ္တူပို့စက် (ဖက်စ်စက်) လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှု ဟူသောရာဇဝတ်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချပြီး နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့၍ သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခု ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်စက်မှု တက္က သိုလ်တို့မှ ကျောင်းသားတထောင်ကျော် ဆန္ဒပြခဲ့ရာ ရာနှင့်ချီ၍အဖမ်းခံရပြီး ကျောင်းအားလုံး ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
ကားလ်စ်ဘဂ်ကုမ္ပဏီ (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်အစီအစဉ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး ဟင်နီကင် ကုမ္ပဏီ (နယ် သာလန်) က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒေါ်လာသန်း ၃ဝ ရင်းနှီးထားမှုမှ ဆုတ်ခွာကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ကိုဒတ်၊ အက်ပယ်လ်၊ ဝေါ့လ်ဒစ်စနီ နှင့် ပက်ပ်ဆီကုမ္ပဏီများက မြန်မာနိုင်ငံမှ လုံးဝ ရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့ကြသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂက ၁၉၉၆ ခု အောက်တိုဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုကိုလည်းကောင်း၊ ဘုံရပ် တည်ချက်ကိုလည်းကောင်း သဘောတူချမှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အီးယူ၏ဘုံရပ်တည်ချက်ထဲတွင် လက်နက်များနှင့် လက်နက်နည်းပညာများ ရောင်းချမှု သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးမှုကို တားမြစ်ခြင်း၊ စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် များ မိသားစုများ လက်ဝေခံအပေါင်းအသင်းများအပေါ် ဗီဇာကန့်သတ်ခြင်း၊ စစ်အစိုးရအရာရှိများ၏ ပင်လယ်ရပ်ခြား ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ခြင်းများ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၆ ခု စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက်တွင် အမေရိကန်သမတ ကလင်တန်က ၁၉၉၇ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကြမ်း ကို လက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုပြီး ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေးရည်ရွယ်ချက်မှလွဲ၍ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ အမေရိကန်၏အကူအညီကို တားမြစ်လိုက်သည်။ အီးယူမှကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသည့် လေ့လာချက်တခုအရ မြန်မာပြည်တွင် အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းခံရသူ ၈ဝဝဝဝဝ (ရှစ်သိန်း) ရှိနေကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက် ၁၉၉၇ ခု မတ်လ ၂၅ ရက်တွင် အီးယူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အထွေထွေဦးစားပေး စနစ် GSP အကျိုးခံစားခွင့်များကို ပယ်ဖျက်ပစ်ဖို့ မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီသို့ တိုးတက်မှု ကင်းမဲ့နေခြင်းကို ထောက်ပြလျက် ကနေဒါနိုင်ငံကလည်း ၁၉၉၇ ခု ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် GSP အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၇ ခု စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် တက်ဆာကို (အမေရိကန်ရေနံကုမ္ပဏီ) က မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရဲတံခွန်ရေနံနှင့် သ ဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ ¤င်း၏ရှယ်ယာ ၄၂. ၉% ကို ပက်ထရိုးနာ့စ် (မလေးရှားကုမ္ပဏီ) နှင့် ပရီမီယာရေနံ (ဗြိတိသျှ ကုမ္ပ ဏီ) သို့ ဒေါ်လာသန်း ၂၆ဝ ဖြင့် ရောင်းပစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံက ယခင်ချေးငွေများကို ပြန်မဆပ်သဖြင့် ၁၉၉၈ ခု စက်တင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာပြည်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအဆက်အသွယ်များကို ဖြတ်တောက်လိုက်သည်။
၂ဝဝ၃ ခု မေလ ၃ဝ ရက်နေ့ညနေတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထောက်ခံသူများကို ကြံ့ဖွတ်အသင်း၏ လက်ကိုင် တုတ်ဖြစ်သော စွမ်းအားရှင်များက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ နအဖက လူသတ် သမားများ၊ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူများကို အရေးယူမှုမရှိခဲ့ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အခြားသူ ၁၉ ဦးကိုသာ ဖမ်းဆီးထိန်း သိမ်းခဲ့ပြီး တနိုင်ငံလုံးရှိ အဲန်အယ်လ်ဒီပါတီရုံးများကိုလည်း ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
၂ဝဝ၃ ခု ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်သမတ ဘွတ်ရ်ှအစိုးရက ကြံ့ဖွတ်အသင်းဝင်များကိုပါ ဗီဇာပိတ်ဆို့ လိုက် သည်။ ၂ဝဝ၃ ခု ဇွန်လ ၁၁ ရက်တွင် အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်က ‘၂ဝဝ၃ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးနှင့် ဒီမိုက ရေစီအက်ဥပဒေ’ ကိုချမှတ်လိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အချက်အလက်အချို့ကို မဖြည့်ဆီးမချင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ သွင်းကုန်အားလုံးကို တားမြစ်ခြင်း၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ အစိုးရနှင့်ဆက်နွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ဆို့ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ လက်ရှိဗီဇာတားမြစ်ချက်နှင့် နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ငွေချေးမှု တားမြစ်ချက်တို့ကို ဥပဒေအဖြစ်အသက်သွင်းခြင်းများ ပြုလုပ်လိုက်သည်။
၂ဝဝ၃ ခု ဇွန်လ ၁၆ ရက်တွင် အီးယူကောင်စီက ပစ်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းကို တိုးချဲ့လိုက်ပြီး ဝန်ကြီးများ၊ ဒုဝန်ကြီးများ၊ ဝန်ကြီးဟောင်းများနှင့် အထက်တန်းစစ်အရာရှိများ၏ မိသားစုဝင်များကို ထည့်သွင်းလိုက်သည်။ ၂ဝဝ၃ ခု ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံက စီးပွားရေးအကူအညီအားလုံးရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေဆဲ စီမံကိန်းများမှလွဲ၍ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ ဦဗ အသစ်ပေးမှုကို ရပ်တန့်လိုက်သည်။ ၂ဝဝ၃ ခု ဇွန်လ ၂၅ ရက် တွင် အီးယူက ခရီးသွားလာရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုကို တိုးချဲ့ကာ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ အကြီးတန်းမန်နေ ဂျာများ၊ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များကို ထည့်သွင်းလိုက်သည်။
၂ဝဝ၃ ခု စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မီးယပ်ရောဂါအတွက် အကြီးစားခွဲစိတ်ကုသမှု ခံ ယူခဲ့ပြီး ပြန်လည်နလံထသည့်အခါ အကျယ်ချုပ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၂ဝဝ၃ ခု နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မျိုးချစ်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၁၁၁ အရ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာဘဏ် နှစ်ခုကို ငွေမည်းခဝါချမှုအတွက် စိုးရိမ်ရသည့်အဆင့် သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ၂ဝဝ၄ ခု အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင် အီးယူကောင်စီက ခရီးသွားလာရေးပိတ်ပင်မှုကို တိုးချဲ့ကာ မြန်မာစစ်တပ်၏ အဆင့်နိမ့်အဖွဲ့ဝင်များကို ထည့်သွင်း လိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ဘဏ္ဍာငွေချေးငှားမှု သို့မဟုတ် အကြွေးပေးမှုကို တားမြစ်လိုက် သည်။
ဆန္ဒပြ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်များကို ၂ဝဝ၇ ခု စက်တင်ဘာလတွင် သွေးထွက်သံယိုနှိမ်နင်းခဲ့ပြီးနောက် ၂ဝဝ၈ ခု ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် စစ်အုပ်စု၏ ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်ရေး JADE အက်ဥပဒေကို ချမှတ်လိုက်သည်။ ထိုကာလက ကျောက်မျက်ရတနာများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဝင်ငွေရရာ တတိယအကြီးဆုံးဇာစ်မြစ်ဖြစ်နေသောကြောင့် ယင်း သို့ ချမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် ၁၉၈၈ ခုကတည်းက ချမှတ်ခဲ့သည့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပို့ကုန်များ တားမြစ်မှုနှင့် နောက် ပိုင်းတွင်ချမှတ်ခဲ့သည့် အကြီးတန်းစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်များအပေါ် ဗီဇာကန့်သတ်မှုများကို ဆက်လက်ထိန်းထား လျက် ၂ဝဝ၇ ခု အောက်တိုဘာလတွင် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် မိသားစုများအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု များ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံကလည်း ၂ဝဝ၇ ခု နိုဝင်ဘာလတွင် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု များ ချမှတ်လိုက်ပြီး လူသားချင်းစာနာရေးပစ္စည်းများမှလွဲ၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပို့ကုန်သွင်းကုန်များကို ပိတ်ပင်လိုက် သည်။
- ဆင်းရဲမွဲတေမှုအတွက် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများကို အပြစ်တင်သူများရှိသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သည် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ဟုဆိုသည့် တံခါးပိတ်စီးပွားရေးပေါ်လစီအောက်တွင် ၁၉၈၇ ခုကတည်းက ဖွံ့ဖြိုးမှု အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံ LDC ဖြစ်နေခဲ့ရာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများထက် စောခဲ့ပြီး ယခုအနှစ် ၂ဝ ကြာ တံခါးဖွင့်ဈေး ကွက်စီးပွားရေး ဖြတ်သန်းခဲ့သော်လည်း LDC အဆင့်မှ မလွတ်မြောက် နိုင်ခဲ့ပေ။
- ဆူးအက်တူးမြောင်းကြောင့် အစောပိုင်းနှစ်ကာလများ၌ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆန်တင်ပို့မှုဖြင့် ချမ်းသာခဲ့ရာ သ ဘာဝသယံဇာတများမှာ မတို့ထိဘဲ ရှိခဲ့သည်။
- မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၆ဝဝ ခန့်ရခဲ့သည်။ ရွှေဓာတ်ငွေ့သိုက်မှ နှစ် ၂ဝ စာချုပ်ဖြင့် ဒေါ်လာ သန်း ၂၄ဝဝဝ (တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ သန်း ၁၂ဝဝ) ရထားသည်။ (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးက ၄ဝ%၊ စစ်အုပ်စုဘက် သားများက ၆ဝ% ပိုင်သည့်) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်က ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းချမှု ၆ဝ% ကိုရရှိသည်။ ခြောက်လတကြိမ် ကျောက်မျက်ရောင်းချမှုမှ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာသန်း ၁ဝဝ ခန့်ရသည်။
- နိုင်ငံခြားငွေအရံ ဒေါ်လာသန်း ၆ဝဝဝ ကျော်ရှိနေရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူတို့၏ဘဝများကို ပြောင်းလဲသွား အောင် လုပ်နိုင်သည့် ဘဏ္ဍာရေးရင်းမြစ်များရှိနေသည်။ သို့သော် စစ်အုပ်စုသည် မြောက်ကိုးရီးယားအကူ အညီဖြင့် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းကွန်ယက်ကြီးကို ဒေါ်လာသန်း ၃ဝဝဝ သုံးစွဲတည်ဆောက်နေသည်။ မြန်မာလေတပ်အတွက် ရုရှား လုပ် အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ လေယာဉ်များဝယ်ရန် ယူရိုငွေသန်း ၄ဝဝ သုံးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် အစိုးရအ သုံးစရိတ်မှာ ဂျီဒီပီ၏ ၁% မရှိဘဲ ပညာရေးအတွက်လည်း ၂% မရှိခဲ့ပေ။ တချိန်တည်းတွင် စစ်အသုံးစရိတ်မှာမူ (၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ တွင်) ၄ဝ% ကျော်ခဲ့သည်။
- ဝီကီလိက်ကြေးနန်းများအရ စစ်အစိုးရသည် ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့မှ ဝင်ငွေများ တိုးတက်ရရှိခဲ့သော်လည်း မြန်မာ ပြည်သူတို့၏ဘဝကို တိုးတက်အောင် ဘာမှမလုပ်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်သံအမတ်ကြီးကိုယ်တိုင် ၂ဝဝ၈ ခု ဇန်နဝါ ရီ ၁၈ ရက်တွင် ဝန်ခံခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကလည်း စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဆွေးနွေးငြင်းခုံကြပါသည်။ ပြင်း ထန်သည့် ဆင်ဆာဖြတ် စိစစ်မှုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များသာမက စီးပွားရေးညွှန်ကိန်းများနှင့် ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများအပါအဝင် အချက်အလက်အားလုံးကို အမြဲယုံကြည်နိုင်စွမ်းမရှိ သို့မဟုတ် အားကိုးနိုင်ခြင်း မရှိဖြစ်နေပါသည်။ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုဆန့်ကျင်ရေးဂိုဏ်းသားများက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများကြောင့် ပြည် သူများ သေဆုံးနေရသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် WHO/UNICEF မှအချက်အလက်များအရ ၅ နှစ်အောက် ကလေး သူငယ်သေဆုံးနှုန်းမှာ ၁၉၉ဝ ခုတွင် လူ ၁ဝဝဝ ၌ ၁၂ဝ-၁၃ဝ ရှိပြီး ၂ဝဝ၈ ခုတွင် ၉၇-၉၈ သို့ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ စာရင်းများအရလည်း ၅ နှစ်အောက် ကလေး-သူငယ်-မွေးကင်းစ သေပျောက်နှုန်းမှာ ၁၉၉ဝ အဆင့်နှင့်နှိုင်းစာလျှင် ကျဆင်းသွားသည်ကို ပြခဲ့သည်။ ဗီတာမင်အေ ဖြည့်စွက်တိုက်ကျွေးခြင်း အပါအဝင် ကာကွယ် ဆေးပေးမှုနှုန်း မြင့်တက်လာကြောင်း၊ လူ့သက်တမ်းမှာ ၅၉ နှစ်မှ ၆၂ နှစ်သို့ မြင့်တက်လာကြောင်း၊ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဖြစ်ပွားမှုမှာ ၉ဝ စုနှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင် ၁. ၅% မှ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဝ ၇၄% သို့ ကျဆင်းသွားကြောင်း မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့လေ၏။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆန့်ကျင်ရေးသမားများ ပြောသလို ယင်းဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် ကလေးငယ်များသေဆုံးနေ သည်ဆိုပါက အထက်ပါကိန်းဂဏန်းများမှာ မယုံနိုင်စရာဖြစ်နေလေ၏။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများက ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကို ပျက်ပြားစေသည်ဖြစ်စေ၊ တိုးတက်စေသည်ဖြစ်စေ၊ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှစ၍ မြန်မာ ပြည်၏ ကျန်းမာရေးစနစ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၉၂ နိုင်ငံအနက် အဆင့် ၁၉ဝ ရှိသည်ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်မာရေး အစီ ရင်ခံစာတွင် သတ်မှတ်ထားသည်။
၂ဝ၁ဝ ခု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများတွင် ပါရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ကို စာရင်းထဲတွင် ကပ် လျက်ရှိသည့် ‘မ’ နှင့်စသောနိုင်ငံတနိုင်ငံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါသည်။
- ဂျီဒီပီ ထဲတွင် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း။ မိုဇမ်ဘစ် ၅. ၉ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်)၊ မြန်မာ ၂. ၁ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၁. ၉ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)
- ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းထဲတွင် အထွေထွေအစိုးရပိုင်း၏အသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း၊ မိုဇမ်ဘစ် ၇၁. ၉ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၇၁. ၈ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)၊ မြန်မာ ၁၃. ၄ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၁၁. ၇ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)
- ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းထဲတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်း၏အသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း၊ မိုဇမ်ဘစ် ၂၈. ၁ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၂၈. ၂ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)၊ မြန်မာ ၈၆. ၆ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၈၈. ၃ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)
- အထွေထွေအစိုးရအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းထဲတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း၊ မိုဇမ်ဘစ် ၁၇. ၉ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၁၂. ၆ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)၊ မြန်မာ ၁. ၂ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ဝ. ၉ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)
- ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းထဲတွင် ပြင်ပရင်းမြစ်များပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း၊ မိုဇမ်ဘစ် ၂၆. ၄ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၅၇. ၈ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)၊ မြန်မာ ၁. ၁ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၇. ၆ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပိုမိုတိုးမြှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းသည် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဆီ ဦးတည်သွားဖို့ အလားအလာမရှိပေ။ အကြောင်းမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကို စစ်အုပ်စုနှင့် လက်ဝေခံရောင်းရင်းများက ချုပ်ကိုင်ထားသော ကြောင့်ဖြစ် သည်။ ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်မှုမှ ပေါက်ဖွားလာမည့် ဓနဥစ္စာများသည် သာမန်လူတန်းစားများထံ လျှံကျ စီးထွက်သွား လိမ့်မည်ဟု ယူဆစရာအကြောင်းမရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ အကြွေဆပ်ရန် ပျက်ကွက်ထားသဖြင့် နိုင်ငံ စုံ ဌာနစုံမှ ငွေချေးငှားမှုအကူအညီရဖို့ အရည်အချင်းမကိုက်ညီပေ။ သို့ဖြစ်၍ စစ်အစိုးရကိုယ်၌က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု များကို တကယ်တန်းချမှတ်ထားသူ ဖြစ်နေပါသည်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အကျိုးပြုခဲ့သည်ဟူသောအဆိုမှာ လက်ခံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံ သူမ စာရေးပြီး စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ဖယ် ရှားရေးအတွက် ကူညီမည်ဟု ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သူမ လွတ်လာပြီးနောက်တွင် ‘ပြည်သူလူထုက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှုများကို တကယ်ဖယ်ရှားစေလိုလျှင် ကျမ စဉ်းစားပေးပါမည်’ ဟုပြောခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများဖယ်ရှားလိုက်လျှင် ဆန္ဒပြပွဲများကို မဖြိုခွင်း မနှိမ်နင်းတော့ဟု မည်သူက အာ မခံနိုင်မည်နည်း။ အဓမ္မလုပ်အားပေး လုပ်ရပ်များ မပြုလုပ်တော့ဟု မည်သူက အာမခံနိုင်မည်နည်း။ လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုများ လုံးလုံးမရပ်သော်မှ လျော့ကျသွားပြီလား။ ၂ဝ၁ဝ ခု နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေ ထွေညီလာခံ တတိယကော်မတီက မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုချ မှတ်စဉ်က မြန်မာပြည်တွင် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်လာပြီဟု ၁၉၂ နိုင်ငံထဲတွင် တနိုင်ငံကမှ မပြောခဲ့ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက်ထပ်အတိုက်ခိုက်မခံရဖို့ သို့မဟုတ် အဖမ်းမခံရဖို့ သို့မဟုတ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မခံရဖို့ မည်သူက အာမခံနိုင်သနည်း။ ၂ဝဝ၃ ခု မေ ၃ဝ ရက် လူသတ်ပွဲကို စွမ်းအားရှင်အမည်ခံ၍ ကြံ့ဖွတ်အသင်းက စီစဉ် ကြီးမှူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကြံ့ဖွတ်အသင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတွင် ကြံ့ဖွတ်ပါတီအဖြစ် အသွင်ပြောင်းခဲ့ ကြောင်း၊ ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့ဝင်များသည် အစိုးရအဖွဲ့ထဲတွင်လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်ထဲတွင်လည်းကောင်း ဆက်ထိုင်နေ ကြ မည်ဖြစ်ကြောင်းကို အမှတ်ရစေလိုပါသည်။
ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်း မေးစရာများရှိသည် …
၁။ ၁၉၈၈ ခု စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှစတင်ခဲ့သည့် လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုသည် အရပ်သားပြည်သူ သန်း ၅ဝ ကို ထိခိုက် နေသလား။
၂။ ၁၉၉၆ ခု အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်မှစတင်ခဲ့သည့် အကောင်ကြီးကြီး ၄ဝဝ ကျော်ကို ဗီဇာပိတ်ပင်ခြင်းသည် ပြည်သူ လူထုကို ထိခိုက်နစ်နာနေသလား။
၃။ ၁၉၈၉ မှစတင်ခဲ့သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာသုံး ဘဏ်လုပ်ငန်းကန့်သတ်ချက်သည် မြန်မာအများစုကို ထိခိုက်နေ သလား။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုသည် ယခုအချိန်ထိ အလုပ်ဖြစ်ပုံမရပါ။ သို့သော် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ပိတ်ဆို့ ဒဏ် ခတ်ရေးဂိုဏ်းသားများကို လက်ညှိုးထိုး အပြစ်ဆိုနေပါသနည်း။ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးပေါ်လစီ ကျရှုံးသွားသည်မှာလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်၊ အာဆီယံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့က မြန်မာပြည်အတွင်းသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လောင်းထည့် နေခြင်းကြောင့် အနောက်အုပ်စု၏ ပိတ်ဆို့တားမြစ်မှုများ သိတ်မထိရောက်ဘဲ ဖြစ်နေသည်။
အနောက်တိုင်း၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရသည် တရုတ်ပြည်အပေါ် ပိုမှီခိုလာရသည်ဖြစ်၍ ပိတ်ဆို့မှုများရုပ်သိမ်းလိုက်ပါက တရုတ်အပေါ်မှီခိုမှု ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟု ယူဆချက်များရှိနေသည်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများ မစတင်မီ ၁၉၈၈ ခုကတည်းက ၁၉၈၈ ခု သြဂုတ် ၅ ရက်နေ့တွင် ယူနန်ပြည်နယ် ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တရားဝင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဖို့ သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးမှု၊ ထို့နောက်တွင် လက်နက်ရောင်းချမှုများနှင့် ၁၉၈၉ ခု ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြိုကွဲမှုတို့နှင့်အတူ မြန်မာနှင့် တရုတ်အကြားဆက်ဆံရေး ကြီးမားစွာနွေးထွေးလာခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုမှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ စစ်ပစ္စည်းကရိယာ ၉ဝ% ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၂ဝဝ၇ ခု နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျင်ကန်းက ‘ငြိမ်းချမ်း တည် ငြိမ်ပြီး ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးသည့် မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်သည်၊ သို့ရာတွင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ဆန့်ကျင်သည်’ ဟု ထပ်လောင်းပြောခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရကား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါက တရုတ်နိုင်ငံက ဝမ်းသာပါလိမ့်မည်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကို မည်သူတို့က ဖယ်ရှားစေချင်ပါသနည်း။ ထိုသူတို့က စိတ်ရင်းစေတနာဖြင့် ပြောသည်ဆိုခြင်းမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် (၁) ၄င်းတို့မှာ အမြတ်အစွန်းရဖို့အတွက်သာ စီးပွားရေး လုပ်လိုသူများဖြစ်ကြ၍ (၂) စစ်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးများ၏ ပေးစာကမ်းစာ စားနေသူများဖြစ်ကြ၍ (၃) ပညာ ရှင် လေ့ကျင့်ခန်းသက်သက်လုပ်နေသူများ ဖြစ်ကြ၍ ဖြစ်ပါသည်။
မူအားဖြင့်ပြောရလျှင် အနောက်အုပ်စု၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများမှာ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားတခုအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အပြင်းထန်ဆုံးအသုံးအနှုန်းများဖြင့် မကျေနပ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီသည့် ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကိုကြည့်လျှင် အာရှတိုက်သားတို့သည် ဘိုးဘေးတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးစံများကို ဂုဏ်ယူသူများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ သည် လူသားဝါဒအပေါ်အခြေခံသည်ဟုဆိုပြီး ကျင့်ဝတ်နှင့် သည်းခံခွင့်လွှတ်မှုကို ကျင့်သုံးပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ် သက်လျှင်မူ ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မားသည့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် အရှေ့တိုင်းတို့သည် သမိုင်းကိုမေ့ပစ် လိုက်ပြီး ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနှင့် သူတော်ကောင်းတရားတို့ကို လျစ်လျူရှုထားကြပါသည်။
Posted in: မှတ်တမ်း,မျှဝေခြင်း,ဆောင်းပါး
January 10, 2011 at 3:56 AM Reply
နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားလို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့လို့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပဲရေးတာ နားလည်နိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးတွေပဲ ဖတ်ရတာ ပျင်းတယ်ဗျာ။ဒီတော့ဗျာ နိုင်ငံရေးလည်းရေးပေါ့ ပြီးတော့ မငယ်နိုင် သြစတြေးလျမှာ သင်နေတဲ့ ကျောင်းက သင်တဲ့ဘာသာရပ် နည်းပညာရပ်လေးတွေကိုပါ မျှဝေပေးရင် စာဖတ်သူတွေ အထူးသဖြင့် ကျောင်းနေအရွယ် ပညာဗဟုသုတရှာဖွေနေတဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေအတွက် ပညာဗဟုသုတ ရတာပေါ့ဗျာ။
January 10, 2011 at 9:07 AM Reply
ကောင်းလိုက်တဲ့ post နိုင်ငံရေးဆိုတာကိုယ်တိုင်မလုပ်ပေမဲ့ လူတိုင်းသိသင့် နားလည်သင့် တယ်...၈.တန်းကျောင်းသား
January 10, 2011 at 10:03 AM Reply
ပို့စ်တွေကိုဖတ်ရတာဗဟုသုတရပေမယ့်လို့ ဆန်းရှင်းပို့စ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေက တမင်တကာ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။တစ်ကယ်ဆိုရင် တပ်ကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ နှိမ်နင်းတယ်ထားအုံး အဲ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်က အဲ့လိုကိုနှိမ်နင်းဖို့ဖန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုများဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်လဲသိပ်နားမလည်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသံတမန်ကိုအကျဉ်းထောင်သွင်း သတ်ဖြတ်မှုဆိုတာက နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်ဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ် သို့ပေမယ့် နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကိုသာ သိနေတဲ့သူဖြစ်ရင် သတ်သင့်ရင်သတ်ပစ်ရပါမယ်။ ဒီလိုမှမသတ်ရင်လဲ နိုင်ငံတော်က မြောင်းထဲကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဓမလုပ်အားပေးကတော့ ဒီလိုပါ မီးကင်းစောင့်ရမဲ့တာဝန်က ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာကတော့မပြောလိုပါဘူး ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများမျာ စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့ဆို ပေါ်တာအဆွဲခံရတာက နိုင်ငံသားက နိုင်ငံ့တာဝန်ကို လိုအပ်ရင်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကိုက်ညီပါတယ်။ ပြီးတော့ ၀န်ဆောင်တပ်သားလို့ခေါ်တဲ့ ပေါ်တာကို နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ စားရိတ်ထုတ်ပေးပြီးသား ဥပဒေရှိပါတယ်။ ရတာမရတာကတော့ ၀န်ဆောင်တပ်သားမှာကော တပ်ရဲ့အရာရှိတွေမှာရော တာဝန်ရှိပါတယ်။ ၀န်ဆောင်တပ်သားကမကျေနပ်ရင် တရားရုံးမှာလျောက်လဲလို့ရပါတယ်။ ငွေကြေးခ၀ါချတာတွေ မူးရစ်ဆေးဝါးရငွေတွေကို သွင်းတာတွေကတော့ သေချာပြောပြဖို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ခက်ပါတယ်။သို့ပေမယ့် တရားလက်လွတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာတစ်ခုမှမပါပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ကျန်သူတွေကတော့ မပြောလိုပါဘူး ဒါပေမယ့် ဆူပူမှုဖြစ်လာရင် ဥပဒေထဲမှာပြဌာန်းထားတဲ့အတိုင်း အချုပ်ချထားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေ(အကုန်လုံးကိုမဆိုလို) တော်တော်များများက ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲဆိုတာကလဲ လူသတ်ပွဲလို့သာခေါင်းစဉ်တပ်ထားတာပါ တစ်ကယ်လို့ စိတ်အခန့်မသင့်လို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်တာ သဘာဝပါပဲ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရှိုးပွဲကြီးတွေလုပ်ကြလို့ လူတွေအများကြီးသေဖူးကြတာ သမိုင်းရှိပါတယ်။ ဥပမာ မန္တလေးမှာလေးဖြူတို့ အိုင်စီ လာဖျော်ဖြေစဉ်က သောက်သောက်လဲသေဖူးပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ပုံကြီးချဲ့ပြောဆိုမှုများပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရေးအခင်းအပြီးမှာ စွဲချက်များတင်တဲ့အခါမှာ ဘုန်းကြီးတစ်ချို့က ဒီပွဲဖြစ်ခါနီးမှ ကောက်ဝတ်လိုက်တာများပါတယ်။ တစ်ချို့ကိုယ်တော်များကတော့အစစ်ပါ။ ဘာပဲပြောပြော ဆိုင်းသံဗုံသံကြားရင် ထကတတ်ကြတာက ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအများစုဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြကြပါတယ် ကျွန်တော်မေးဖူးပါတယ် ဘာဖြစ်လို့အော်နေတာလဲဆိုတော့ လူတွေအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ ပျော်စရာကောင်းလို့တဲ့။ အင်မတန်ကို စိတ်ညစ်ညူးရပါတယ်။ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလိုသဘောထားတတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးများရဲ့ သဘောထားပဲဖြစ်ပါတယ် အဓိပ္ပါယ်ကို ရေရေရာရာ သိတဲ့လူအင်မတန်ရှားပါးပါတယ်။ လက်သီးလက်မောင်းမတန်းလိုက်ရရင် ခေတ်မမှီဘူးလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ပြီးမှ ဥပဒေအရ စွဲဆိုချက်တွေတင်တော့မှ မသက်ဆိုင်တဲ့ အရပ်သားတွေက ငိုယိုကြတော့တာပါပဲ နောက်တော့ နိုင်ငံရေးသမားအုပ်စုက နည်းနည်းပါးပါးထောက်ပံ့လိုက်ရာမှအစပြုပြီးတော့ ထောင်ထဲရောက်သွားသူတွေက နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်တော့တာပါပဲ။ အင်မတန်မှစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုတစ်ချက်ချင်းစီလိုက်ကြည့်လိုက်ရင် တွက်ချက်ပြလိုက်ရင် ကျန်တာတွေကပေါ်လာတော့တာပါပဲ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဖို့ဖြစ်လာတာကတော့ ဒေါ်စုကြည်နဲ့အပေါင်းအပါတစ်ချို့ရဲ့ မဆင်မခြင်လုပ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကဟာ ယနေ့ကမ္ဘာမှာ သြဇာအာဏာသိပ်ကြီးထွားတာ အကုန်လုံးအသိပါပဲ။ဒီတော့ သူ့ရဲ့အာဏာကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ သူများနိုင်ငံတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားရာမှာ မြန်မာပြည်က လွယ်လင့်တကူလက်မခံခဲ့လို့ ယနေ့ထိ စီးပွားရေး တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယက အခြေအနေအမှန်ကိုသဘောပေါက်သူများဖြစ်ကြသလို။ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်များကလဲ နိုင်ငံရဲ့ပထ၀ီအနေအထားက အာရှကိုကောင်းကောင်းခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်းရှိနေတာကိုရိပ်မိခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကသာ ၀င်လာခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့က ဘေးနှစ်နိုင်ငံတိုက်တာနဲ့အရင်ကျဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအင်အားလက်နက်အင်အား အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ကိုဘယ်လိုမှ မယှဉ်သာတာကို စဉ်းစားတတ်သူတိုင်းလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိက စီးပွားရေးမပိတ်တာ ပိတ်တာက နိုင်ငံတော်ကိုမကျဆုံးစေနိုင်ပါဘူး။ သူဝင်လာရင် အစောဆုံးကျဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကအရှေ့ကိုမျှော်တွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲစဉ်းစားတတ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။။။
January 10, 2011 at 12:28 PM Reply
မောင် - အကြံပြုတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်မ စာရေးမအားလို့ သူများရေးထားတာကို ပြန်ဖေါ်ပြတဲ့ ပို့စ်တွေနဲ့ အရင်က ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာကို လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီလို့ မဖတ်ရသေးသူများ ဖတ်လို့ရအောင် အပေါ်ခဏ ပြန်ဆွဲတင်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေ များပါတယ်။ မောင်အတွက် ငြီးငွေ့စရာ ဖြစ်ပေမဲ့ တခြားသူတွေအတွက် ဥပမာ အောက်က ရှစ်တန်း ကျောင်းသားလေးအတွက်ဆို အသစ်အဆန်း ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား။ အားလုံးနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လို့ မိမိနှစ်သက်ရာကို Label အောက်မှာ ရွေးဖတ်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ ကျန်းမာရေး/ဇိဝသိပံ္ပနဲ့ ပညာရေးခေါင်းစဉ်အောက်က ပို့စ်အတော်များများက ကျောင်းတက်တဲ့ အတွေ့အကြံက ရတဲ့အသိတွေကို ပြန်မျှဝေထားတဲ့ပို့စ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှစ်တန်းကျောင်းသားလေး - အန်တီဘလော့ဂ်မှာ စာလာဖတ်တာ ၀မ်းသာပါတယ်။
နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ထားတဲ့ပို့စ် အတော်များများက မိမိငယ်စဉ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလို အလိမ်မခံရအောင် အခုလူငယ်တွေ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ပို့စ်တွေပဲ များပါတယ်။ Label အောက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေကိုလည်း ရွေးဖတ်နိုင်ပါတယ်။
မောင်တာဝ - စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အရှည်ကြီး လာရှင်းပြသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မောင်တာဝ အခုလို ရှင်းပြတာ မိမိလက်ခံယုံကြည်ထားတာကို သူများတွေသိစေချင်လို့ တကယ်စေတနာနဲ့ အချိန်ကုန်ခံပြီး လာရှင်းပြသွားတယ်ဆိုတာ လုံးဝ ယုံကြည်ပြီး စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒီပို့စ်က အစ်မရေးတာမဟုတ် စာရေးသူနဲ့ သဘောထားချင်း ထပ်တူကျလို့ ပြန်ဖေါ်ပြထားတာ ဖြစ်တယ်။ ပို့စ်ကို သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ရင် ပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာတွေဟာ အမြင် (Opinion) တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အချက်အလက် (Fact) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မောင်တာဝ ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေက Fact မဟုတ်ဘူး မိမိထင်တာကို မိမိပြောတာဖြစ်လို့ ထင်တဲ့အရာတိုင်းက အမြဲတမ်း မမှန်ဘူးဆိုတာနဲ့ တခါတရံ မိမိထင်တာနဲ့ လုံးဝ တကယ်အမှန်က လုံးဝဆန့်ကျင်နေတတ်တာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ မှန်မမှန်ကို အစ်မသတ်မှတ်တဲ့ စံက လူ့အခွင့်အရေးအပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့အတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို နားမလည်ဘူးလို့ ၀န်ခံထားတဲ့ မောင်တာဝကို အစ်မ အကျယ်ကိုတော့ ပြန်မဆွေးနွေးတော့ဘူး။ အဲဒီစံကို မသိရင် ဘာကအမှန် ဘာကအမှားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာလည်း မိမိတွေးထင်တာ (သို့) အပေါ်က ပြောပြတာကိုပဲ မှန်တယ်လို့ ယူဆနေမှာ သေချာပါတယ်။ လိုရင်းပြောရရင်တော့ မောင်တာဝရဲ့ အခုပြောနေတဲ့ သဘောထားတွေက တချိန်က အစ်မကိုယ်တိုင်ရဲ့ သဘောထားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ လေ့လာမှု ပေါင်းစပ်ပြီးမှပဲ မိမိထင်နေတာ မှန်မမှန် ဆုံးဖြတ်လို့ရနိုင်မယ်လို့ပဲ အစ်မ အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်။
January 10, 2011 at 8:30 PM Reply
ကိုတာဝ.အတွက် ငယ်နိုင် ရှင်းပြသွားတာ ကိုတာဝ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး...ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား ကိုမူတည်ပြီး လူတွေရဲ့ အယူအဆမတူညီတာ ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်...ကိုတာဝ ရေးထားတာကိုဖတ်ကြည့်ပြီး ပညာတတ်တစ်ယောက်ဆိုတာခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်..ကျွန်တော် တပ်ထဲမှာနေခဲ့ဖူးတယ်.ကိုတာဝ...ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူး....ပြည်သူတစ်ယောက်ပါ...ကိုယ့်တိုင်းပြည်လောက်သယံဇာတမရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံမှာ ကျွန်လုပ်နေရတယ်...ဒီက တောခါင်တဲ့ရွာတွေရောက်တော့ ပိုပြီးခံစားရတယ်...ကျွန်တော် စာများများမရေးတတ်လို့ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ....၈..တန်းကျောင်းသား
January 10, 2011 at 11:01 PM Reply
လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို မွေးဖွားရာမှာ အခု UN အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ၂၀၀ နီးပါး ဖြစ်တဲ့အချိန် သူများနောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံက လိုက်ပြီး အရူးထကာ စိတ်ဝင်စားနေခြင်းမဟုတ်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အချက် (၃၀) ကို စတင် မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ နိုင်ငံ ၆၀ ကျော်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာ မောင်သာဝဖတ်ဖို့ ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အတိုချုပ်
အပိုဒ် (၁) - လူတိုင်းသည် မွေးဖွား လာကတည်းက တန်းတူညီမှုရှိသည်။
အပိုဒ် (၁၆) - အရွယ်ရောက်သူတိုင်း မိမိဆန္ဒဖြင့် လက်ထပ် အိမ်ယာ ထူထောင်ခွင့်၊
အပိုဒ် (၁၇) - ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊
အပိုဒ် (၂၀) - ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖွဲ့ စည်းထားသောအဖွဲ့ များအား လွတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက်ခွင့်၊ စုဝေးခွင့်၊
အပိုဒ် (၂၆) - ပညာ သင်ကြားပိုင်ခွင့်၊
အပိုဒ် (၂၇) - ယဉ်ကျေးမှုဘဝတွင် ပါဝင်ပိုင်ခွင့်နှင့် မိမိတီထွင်မှု အကျိုးကို မိမိခံစားပိုင်ခွင့်၊
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း http://nge-naing.blogspot.com/2009/12/blog-post_10.html မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
January 13, 2011 at 3:56 PM Reply
“အားလုံးပဲစဉ်းစားတတ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။။။” ဆိုတဲ့ အပေါ်က မောင်တာဝရဲ့ စေတနာကို ကျေးဇူးတော့တင်ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာကလည်း မငယ်နိုင်ရဲ့ “လိုရင်းပြောရရင်တော့ မောင်တာဝရဲ့ အခုပြောနေတဲ့ သဘောထားတွေက တချိန်က အစ်မကိုယ်တိုင်ရဲ့ သဘောထားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။” ဆိုတဲ့ ပြန်ကြားထားတာဟာ အတော်ကြီးကို ပြည့်စုံနေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
မောင်တာဝရဲ့ ပြောပြချက်တွေ ကျိုးကြောင်းညီမညီ မပြောလိုပေမယ့် သတိထားစရာတစ်ခုက ကနေ့ မငယ်နိုင်အပါအဝင် လူအတော်များများဟာ တချိန်က စစ်တပ် မဟုတ်ရင်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာ ရိုးရိုးသားသား ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်ဖူးသူတွေ ဖြစ်နေတတ်ကြတာကိုတော့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာ သိကြ မြင်ကြ နားလည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်မှာမှ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ တို့တာဝန်အရေး ၃ ပါးတွေဘာတွေနဲ့အတူ ကြီးပြင်းလာရ သူတွေလောက် မသိ နားမလည်နိုင်ဖူးလို့ ထင်မိရင်တော့ တစ်ခုခု ချွတ်ချော်နေပြီလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အချိန်လည်း နည်းနည်း ယူကြည့်ပါအုံးလို့ ထပ်ဆင့် အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ငြင်းစရာတွေထက် ဆွေးနွေးချင်တဲ့ဖက်က စိတ်အကဲပိုတာကြောင့် အပေါ်ကမှတ်ချက်ကို အသေးစိတ်ဆက်ပြောဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ ပေါ်တာအကြောင်း အနည်းအကျဉ်း ပိုသိလာနိုင်မယ်လို့ ယူဆပြီး အချိန်လည်းရရင်တော့ လင့်တစ်ခု ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ http://mahnkoko.blogspot.com/2010/12/blog-post_17.html
January 14, 2011 at 3:26 AM Reply
ဆန်ရှင်ပိတ်တာက ဒေါ်စုပိတ်တာမဟုတ်ဘူး အမေရိကန်ပိတ်တာ မှန်တယ်။သို့သော် တစ်ချိန်က ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် စီးပွားရေးပိတ်ခိုင်းခဲ့ဖူးပါတယ် အားလည်းပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါကို ငြင်းလို့မရပါဘူး။စီးပွားရေးပိတ်တာက အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်ရေး ဘာညာတွေကြောင့်ပိတ်တယ်ဆိုတာ ခဏထားလိုက်ပါ။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာ ပြည်သူတွေကိုပဲတိုက်ရိုက်ထိတယ်ဆိုတာ ဒေါ်စုကြည်ကိုယ်တိုင်က မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဒါကို ပြည်သူကိုထိမထိပြန်ကြည့်မယ် ထိတယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စကို ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကလိမ်ကကျစ် အသုံးနှုံးသုံးတာတွေ့ရတယ်။ရုပ်သိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ အဆိုကို မပြောဖူးဘူး။
အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေလိုချင်တာက သူမရဲ့ပါးစပ်က ဆန်ရှင်ကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုသင့်တဲ့စကားပဲ။ရုပ်သိမ်းတာမသိမ်းတာက အမေရိကန်အလုပ်။မိမိလူမျိုးကို ပိတ်ဆို့ထားမှုကို ဆန့်ကျင်ရမှာက မိမိနိုင်ငံသားတွေအလုပ်။ဒေါ်စုကြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုထိခိုက်တဲ့ဆန်ရှင်ကို ဘာလို့ ရုပ်သိမ်းဖို့မတောင်းဆိုနိုင်ရတာလဲ???
January 14, 2011 at 4:32 AM Reply
ဘာလို့ ရုပ်သိမ်းဖို့ တိုက်ရိုက် မတောင်းဆိုလဲဆိုရင် ကိုယ့်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ သူများနိုင်ငံက ဒါဏ်ခတ်ပေးထားတာ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့အရိပ်အယောင် တစက်မျှမပြသေးပဲ၊ ဘယ်ပြည်သူတွေကို တိုက်ရိုက်ထိပါသလဲဆိုတာ အသေအချာလုံးစေ့ပတ်စေ့ မသိရပါသေးပဲ၊ ဘယ်သူက အရူးထပြီး ကိုယ့်ရန်သူကို ချည်ထားတဲ့ ကြိုးဖြည်ပေးပါလို့ပြောမလဲ၊
မှတ်ထား ပိတ်ထားတာ မိမိလူမျိုး အကုန်လုံးကိုမဟုတ်ဘူး။.အထက်က ဆောင်းပါးမှာ ပါသလို အုပ်ချုပ်ရေးထိပ်ဆုံးက လူ အနည်းငယ်ကိုပါ။ ဒေါ်စုကို အသရေဖျက်ချင်တာနဲ့ ရောမချပါနဲ့ ကိုယ့်လူရာ။
ဘယ့်နှယ် ပိတ်တာက ထိပ်ပိုင်းကလူတွေကို တားဂါတ်ထားပိတ်တာ၊ အကြောင်းရင်းက သူတို့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်လို့၊ ဒါကို လူ့အခွင့်အရေး ခနထားလိုက်ပါ . အရင်ဖွင့်ပေးဖို့ သာပြောပါလား လာပြောနေတာ တကယ် ဟာသပဲ။
ဟိုးအပေါ်က မောင်တာဝကလဲ တကယ်ဟာသပဲ..မျှတချင်သယောင် လေသံဆောင်ထားပေမယ့်.. state terrorism နဲ့ စတိတ်ရှိုးပွဲ ရန်ဖြစ်တာကိုတောင် ရောကြိတ်ထားပြီး ..ဒီပဲယင်းတော့ ဘွာတေးထားလိုက်ပါ.. လာလုပ်နေတာ မင်းတို့ လေသံတွေ ရိုးနေပီကွ။
January 14, 2011 at 1:31 PM Reply
ဆန်ရှင်ပိတ်တာက ဒေါ်စုပိတ်တာမဟုတ်ဘူး အမေရိကန်ပိတ်တာ မှန်တယ်။ စီးပွားရေးပိတ်တာက အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်ရေး ဘာညာတွေကြောင့် ပိတ်တယ်။
အစိုးရလိုချင်တာက ဆန်ရှင်ကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့စကားပဲ။ ရုပ်သိမ်းတာ မသိမ်းတာက အမေရိကန်အလုပ်။ မိမိအစိုးရကို ပိတ်ဆို့ထားမှုကို ဆန့်ကျင်ရမှာက မိမိ (ကျုပ်) အလုပ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင် အစိုးရကို ထိခိုက်တဲ့ဆန်ရှင်ကို ဘာလို့ ရုပ်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုရတာလဲ???
အို ... ငါဘာတွေ ရေးနေမိပါလိမ့် ....